UCELA KUNIKWE IZINTOMBI NTO ITHUBA LOKUKHULEKELA I-COVID19 - Ilanga News
Home Izindaba UCELA KUNIKWE IZINTOMBI NTO ITHUBA LOKUKHULEKELA I-COVID19
UCELA KUNIKWE IZINTOMBI NTO ITHUBA LOKUKHULEKELA I-COVID19
UCELA kunikwe izintombi nto ithuba umsunguli kaNomkhubulwane Cultural Organisation, uNkk Nomagugu Ngobese, lokuba zivunyelwe ukuhambela entabeni ziyokhulekela ukuphepha kwezwe kulolu bhubhane lweCovid-19.
UNkk Ngobese uthi ukholwa wukuthi uMvelingqangi angezwa uma kukhuleka zona ngoba zimsulwa.
Ekhuluma naleli phephandaba uNkk Ngobese, uthi yize odokotela basentshonalanga bezama ngawo wonke amandla ukulwa nalolu bhubhane, kodwa njengezwe elinamasiko kufanele leli gciwane kulwiwe nalo ngazo zonke izindlela, kungathenjelwa olwazini olulodwa kuphela (lwasentshonalanga).
“Abefundisi nezinyanga mabanikwe ithuba benze okwabo ngokunjalo nezintombi nto zinikwe ithuba ngoba nakudala izintombi zaziba yisixazululo uma izulu lomisile ziyothandaza bese imvula ibuya. Nangesikhathi se-Xenophobia izintombi zathandaza kwaba nomehluko.
“Sicela uMengameli wezwe, uMnu Cyril Ramaphosa anike izintombi nto ithuba lokuba zike ziyokhuleka entabeni. Izintombi zingakhishwa ngokwezifunda zonke ziye entabeni eziseduze nayo. Sishaywa ngalesi sifo nje yingoba sonile, sasuka kokwethu sabambelele kokwabantu.
“I-Afrika selokhu kwathi nhlo kakusiyo indawo okudlalela kuyona izifo nemvelo kodwa manje nathi sesiyakuthola ngoba senza okuthandwa yithina sakhohlwa ngokhokho bethu,” kusho uNkk Ngobese.
Isibalo sabahaqwe yileli gciwane sesenyukele ku-2415 kuleli, kwadlula emhlabeni abantu abawu-27. Inhloso yokuvalwa kwezwe wukugwema ukusondelana kwabantu okusabalalisa ngamandla leli gciwane nxa kukhona osethelelekile phakathi kwabo.
Previous articlekumisiwe ukwamukelwa kweziguli esibhedlela sase-toti
Next articleuzibulale nonina “obejolelwa wumkakhe”